‘सुख्खा बन्दरगाहा सँगै दोधारा चाँदनीलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु पर्छ’ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रतिनिधि सभा लागि कञ्चनपुर क्षेत्र नंं. ३ मा वाम गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेदवार डा. दिपक प्रकाश भट्ट विजयीभएपछि माहाकाली नगर क्षेत्रको विकास मुलधारमा जोड्न प्रयासरत छन् । कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्देदवार डा. दिपक प्रसाद भट्ट तीन दशक देखि राजनीतिक सक्रिय छन् । पुख्र्यौली घर बैतडी भएका भट्टको जन्म २०२९ साउन २७ गते बैतडी दशरथ चन्द नगरपालिका–१ देबलहाटमा भएको हो । उनी विद्यार्थी जीवन देखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । २०४६ को जनआन्दोलन अघि नै भट्टको राजनीतिक यात्रा सुरु हो । घर परिवारको राजनीतिक वातावरणमा सानै देखि घुलमिल भएका उनले २०४३ देखि तत्कालिन (माले) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट राजनीतक यात्रा सुरु गरेका हुन् ।
२००७ सालको क्रान्तिका अगुवा स्वर्गिय दत्तराम भट्टबाट प्रेरित भएर राजनीतिमा आएका हुन् । ६ महिना डोटी जेल बसेका स्वर्गिय भट्ट उनका ठूलो बुवा हुन् । ‘घरमा राजनीतिक वातावरण थियो, त्यसबाट सानैमा प्रभावित भए,’ उनले भने । एमालेका विदेश विभाग सदस्य भट्ट पार्टीमा स्वच्छ छवि, बौद्धिक व्यक्तित्व, परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिका जानकार नेता हुन् । वाम गठबन्धनका उम्मेदवार उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी, सडक सबैको विकास गरी क्षेत्र नं. ३ लाई नमूना बनाउने एजेण्डा अघि सारेका छन् । ‘मिठा र गुलिया कुरा गरी जनतालाई धेरै दिनसम्म भ्रममा राखियो, म त्यसलाई तोड्न चाहन्छु’ उनी भन्छन,‘यस पटक जनताले त्यो मौका दिने छन् ।’ दार्चुलाको लटिनाथ माध्यमिक विद्यालय मार्माबाट प्राथमिक शिक्षा हासिल गरेका भट्टले महेन्द्रनगर मावि(साधरण) बाट प्रवेश उत्तीर्ण गरेका हुन् । उनले लटिनामा कक्षा १–५ र बैजनाथ माविमा कक्षा ७–८ सम्म अध्यन गरेका थिए । विज्ञान र राजनीति शास्त्रका स्नात्तकोत्तर भट्टले जवाहरलाल नेहरु विश्विद्यालयबाट अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षामा विद्यावारिध (पिएचडी) गरेका छन् । समृद्धि तथा बिकासको बारेमा माहाकाली नगरपालिका क्षेत्रको भ्रमणको बेला प्रतिनिधी सभाका सदस्य डा. दिपक प्रकाश भट्ट संग पत्रकार पप्पु गुरुङ्गले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको अंश